Faahfaahin: Qaraxyadii xalay ka dhacay Muqdisho - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG)- Ciidamada ammaanka ee dowladda ayaa ilaa xalay waday howlgallo saacado badan qaatay oo ay ku sifeynayaan naftood-halligeyaal xalay xoog ku galay dhisme ku dhaggan hotelka Makka Al-mukarammah oo ka yaalla jidka Makka ALmukarama.
Illaa hadda lama oga in la ciribtiray raggii weerarka soo qaaday balse daryanka rasaasta ayaa weli laga maqlayaa agagaarka hoteelka.
Abaare xalay 8-dii habeenimo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay agagaarka hotelka Maka Almukarama halkaasi oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen toboneeyo qof oo fadhiyay banaanka hotelka iyo maqaayado u dhowaa hoteelka.
Saacad kadib xiligii qaraxa hore dhacay, qarax labaad ayaa ka dhacay afaafka hore ee mid kamid ah hoteellada ku yaalla agagaarka isgooyska lanbar afar oo ah mid kamid isgoysyada ugu mashquulka badan magaalda Muqdisho.
Sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka oo la hadlay warbaahinta, is-rasaaseyn ayaa dhex-martay ciidanka iyo maliishiyada looga shakisanyahay in ay ka tirsanyihiin al-Shabaab.
Xarumaha caafimaadka iyo kooxaha gargaarka ayaa sheegay in ilaa 25 qof ay ku dhinteen qaraxyada, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay Cabdiqaadir Cabdiraxmaan oo ah agaasimaha Aamin Ambalaas 25 qof oo meyd ah iyo 30 qof oo dhaawac ah ayey gaarsiiyeen goobaha caafimadka.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Geelle ayaa sheegay in argagaxisada weerarkan geystay ay u dan lahaayeen gumaadka shacabka Soomaaliyeed.
“Wax ay dileen sidoo kalena dhaawaceen tiro dad oo ku jiray dhismayaasha la weeraray balse ciidamada ayaa iska caabiyay” ayuu yiri Wasiir Geelle.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyadda weeraradii u danbeeyay ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ururka al-Shabaab ayaa doonaya in ay Soomaaliya kala wareegaan dowladda Soomaaliya iyaga doonaya in ay taagaan maamul ay iyagu gacanta ku hayaan inkastoo muddooyinkii u danbeeyay ay ciidamadda xoogga dalka iyo AMISOM ay ka saareen magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Koonfurta Soomaaliya.
AMISOM oo dowladda Soomaaliya wareejisay kulliyada Jaalle Siyaad
RW Kheyre oo ku baaqay in loo midoobo sugidda amniga